भिडियो – Page 522 – Etajakhabar
गीत लेख्नका लागी माइक्रोमा हिँड्छु : चर्चित संगीतकार कालीप्रसाद बास्कोटा (भिडियो)
काठमाडौँ । चर्चित संगीतकार कालीप्रसाद बास्कोटाले नयाँ नयाँ गीत संगीत सृजना गर्न माइक्रोमा हिँड्ने गरेको बताउँछन् । एक अन्तरवार्तामा कुराकानी गर्दै कहिले हँसाउने, पारी त्यो डाँडामा, लैजारे, साइली, लगायतका चर्चित गीत दिएका गायक, संगीतकार र गीतकार समेत रहेका कालीप्रसाद बास्कोटाले आफ्नो जीवनका केही रोचक पक्षहरु पनि खोलेका छन् ।
राजेश हमाल र गौरी मल्लको नयाँ फिल्म युट्युबमा सार्वजनिक,हेर्नुहोस् पुरा फिल्म
काठमाडौँ । लोडसेडिङमुक्त देश बनाउने अभियानको कथावस्तुमा केन्द्रित चलचित्र ‘उज्यालो नेपाल’ निर्माण भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भएका प्रयास र उपलब्धीलाई समेटेर चलचित्र ‘उज्यालो नेपाल’ निर्माण भएको हो । उर्जामन्त्री भएपछि जर्नादन शर्माले लिनुभएको अठोट र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गरिएपछिको परिर्वतनलाई चलचित्रमा देखाइएको छ । उनीहरुको इच्छाशक्तिका कारण उर्जा क्षेत...
यसकारण धुर्मुस-सुन्तलीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ (भिडियो)
यतिबेला धुर्मुस सुन्तली निकै चर्चामा छन् । हालै मात्र महोत्तरीको बर्दिवासमा बनेको एकिकृत नमुना मुसहर बस्तीको हस्तान्तरण भएको छ । धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनद्वारा बनेको मुसहर बस्तीसँगै हालसम्म तीन बस्ती भएका छन् । यसै क्रममा एकजना विदेश बस्ने नेपालीले धुर्मुस-सुन्तलीलाई देश निकाला गर्नुपर्ने बताएका छन् । किन देश निकालाको माग भयो त ? हेर्नुहोस् भिडियो:
‘ट्वाकेन्द्र निवास’मा गायक पशुपती शर्मा, हेर्नुहोस् कमेडी टक शो (भिडियो)
काठमाण्डौ। फरक धारको नेपाली कमेडी टक शो 'ट्वाकेन्द्र निवास' शुरु भएको छ । विभिन्न क्षेत्रका लोकप्रिय तथा चर्चामा रहेका अतिथिहरूसँग ट्वाकेन्द्र निवासमा गरिने रमाइलो कुराकानीलाई ट्वाकेन्द्र काका र मट्टयाङ्ग्री काकीको कमेडी ड्रामा शैलीको प्रस्तुतिले कार्यक्रमलाइ रोचक बनाएको छ । यो कार्यक्रमको पहिलो श्रृंखला रिलीज भईसकेको छ । कार्यक्रम हरेक हप्ताको बुधवार यूट्युब च्यानल NK TV मा आउने गर्छ । संसारको...
मिलन अमात्यलाई चोखो माया गर्छु भनी कस्ले ढाँट्यो ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
ताजा खबर काठमाडौँ । एउटै मुटु सयौँसित किन साट्यौ? चोखो माया गर्छु भनी मलाई किन ठाँट्यौँ ? यि प्रश्नहरु हुन् चर्चित गायिका मिलन अमात्यका । गायिका अमात्यको निजी जीवनका प्रश्नहरु नभई गीतकार डिपी खनालका शब्द शृजनामा तयार पारिएको गीतको माहोलमा सोधीएका प्रश्नहरु निकै मार्मिक छन् । जसमा धनु ग्यामीको संगीत रहेको छ । दीपक खाँडले निर्देशन गरेको भिडियोमा निराजन, सम्पदा र उर्मिलाको प्रेम रोमान्सलाई नजिकबाट...
यस्ता प्रेमी जसले प्रेमीकाको छायाँ देखेर नै मान्छे ठम्याउँछन्
काठमाडौँ । जापानलाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर संगीतमा अगाडि बढिरहेका गायक तथा मोडल विनोद भण्डारीको लोक दोहोरी गीत छायाँ देखे चिन्छु बजारमा आएको छ । एकनारायण भण्डारीको शब्द संगीत, विनोद भण्डारी र देवी घर्तिको स्वरमा सजिएको गीतलाई सितारा म्युजिकले बजारमा ल्याएको हो । प्रकाश भट्टको निर्देशनमा करण चसिरले छायाँकन गरेको भिडियो विष्णु शर्माले सम्पादन गरेका हुन । भिडियोमा अभिनय भने अन्जली अधिकारीसंग विनोद स्व...
बलिउडमा संर्घष गरिरहेकी नेपाली गायिका ‘खुशी’, जो दिपक लिम्बुका शब्द-शब्दमा माया देख्छिन् (भिडियो)
ताजाखबर, काठमाडौँ । लामो समयदेखि भारतमा गीत संगीत सिकिरहेकी गायिका हुन् खुशी भट्टराई । भारतमै रहेर बिभिन्न साँङ्गितिक स्टेज शोहरुमा ब्यस्त रहेकी गायिका भट्टराईले करिब आधा दर्जन बढी गीत बजारमा ल्याएकी छिन् । जसका कारण उनको चर्चा बढ्न थालेको छ । उनी वर्षको १ पटक नेपाल आउँछिन् आफ्नो नयाँ गीतको कामको शिलशिलामा आउने सुन्दरी गायिकाको मोडलीगंमा पनि जम्ने इच्छा रहेको बताउँछिन् । बलिउडका चर्चित गायक कुमा...
मधेसमा अंगीकृत नागरिकको दबदबा बढेका बेला मधेसी युवाले नेपाली को हो भन्ने सन्देश दिएको भिडियो बन्यो भाइरल
काठमाडौँ । मधेसका सामाजिक अभियन्ता हुन् रमेश प्रसाद शाह । आफ्ना लेख रचना मार्फत सामाजिक संजालमा सक्रिय शाहले नेपाली नागरिकको अर्थ बोल्ने सन्देशले भरिएको एउटा भिडियो युट्युबमा अपलोड गरेका छन् । जसले पछिल्लो समय मधेसमा अंगीकृत नागरिकको दबदबा बढ्दै गएका बेला मधेसी युवा साहले नेपाली को हो भन्ने सन्देश दिन खाजेका छन् । जुन भिडियोले अहिले चर्चा समेत बटुलीरहेको छ ।
मिस नेपालका लागी सुन्दरी अब काठमाडौँमा मात्रै होइन, गाउँ-गाउँमा पनि छान्ने क्रम सुरु भयो : मिस नेपाल अस्मि
ताजा खबर नेपालगंज बाँके । मिस नेपाल अस्मि श्रेष्ठले मिस नेपाल सारा नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम भएको बताएकी छिन् । ‘मिस नेपालको खोजी’ कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालगन्ज पुगेकी मिस नेपाल श्रेष्ठले बितेको १ वर्षमा आँफु मिस नेपाल भइसकेपछि ठूलो परिवर्तन आएको जिकिर गरेकी छिन् । सौन्दर्य प्रतियोगीता नारीको प्रतिभा उजागर गर्ने एउटा अवसर भएको र यसलाई अहिले सबै नेपालीले स्व...
टिकापुर घट्ना: माताको भविष्यबार्णी यसरी सत्य साबित भयो (भिडियो)
काठमाडौँ - २०७२ सालको भदौ सात गतेको टिकापुरको घट्नामा ऊहा बसन्ती बिष्ट बहीनीको बुवा बलराम बिष्ट( सहिद)हुनु भएको थियो । त्यो बेलाको कुरा आज सम्झना भो ऊहालाई र भन्नुहुन्छ माता हजुरले यो भबिस्यबाणी गर्नु भएको थियो नी माता जी आज म हजुर सामु आए भन्दै आफ्नो बुवालाई सम्झिनु हुन्छ।।।
Previous 1 … 521 522 523 … 576 Next